လီဗာပူးလ်နဲ့ပွဲစဉ်မှာ လမ်းပတ် ဘာတွေမှားယွင်းခဲ့လဲ? | FOX Sports Myanmar
လီဗာပူးလ်နဲ့ပွဲစဉ်မှာ လမ်းပတ် ဘာတွေမှားယွင်းခဲ့လဲ?
လမ်းပတ်ရဲ့ချယ်လ်ဆီးကတော့ ဥရောပစူပါဖလားပွဲမှာ လီဗာပူးလ်ကို ပင်နယ်တီနဲ့ အရေးနိမ့်ခဲ့ပြီး ရှုံးပွဲဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ခြေစွမ်းပိုင်းအရ ကျေနပ်စရာကောင်းခဲ့ပေမယ့်လည်း ဖလားလုပွဲတစ်ပွဲမှာ အရေးနိမ့်ခဲ့တာမို့ နာကျင်စရာတွေတေ့ာ ဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ ကန်တေ၊ ပူလီဆစ် နဲ့ ဂီရော့ဒ်တို့ကို ထည့်သွင်းခဲ့တဲ့ ချယ်လ်ဆီးကစားပုံက မျှော်လင့်ချင်စရာတော့ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာလည်း ဦးဆောင်ဂိုးရခဲ့ပြီးမှ အရေးနိမ့်ခဲ့တာပါ။ ချယ်လ်ဆီး ဘာလို့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတာလဲဆိုတာကို တွက်ဆကြည့်မယ်ဆိုရင်..။
၃။ ဖာမီနိုကို မထိန်းနိုင်ခဲ့
ပထမပိုင်းမှာ ချယ်လ်ဆီးက လီဗာပူးလ်ကို ကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကပိုပြီးတော့ ဘောလုံးပေးပို့မှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သလို အခွင့်အရေးတွေလည်း ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒုတိယပိုင်းမှာ ဖာမီနိုဝင်လာပြီးနောက် အားလုံးပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ ဖာမီနိုက ချယ်လ်ဆီးညာခြမ်းခံစစ်ကို အချိန်ပြည့်ပြေးလွှားလှုပ်ရှားပြနေပြီး ဒုက္ခပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဖာမီနိုရဲ့ အလှုပ်ကစားမှုတွေက အသင်းဖော်မာနေးကိုပါ ခြေစွမ်းပြလာနိုင်စေပြီး သူ့ကြောင့်ပဲ နေရာလွတ်တွေ ရလာပြီး ကစားပေါက်ချောင်သွားတဲ့ မာနေးက လီဗာပူးလ်အတွက် ဂိုးတွေသွင်းပေးသွားခဲ့ပါတယ်။
၂။ အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာ ပွဲကိုအဆုံးမသတ်နိုင်ခြင်း
ယူနိုက်တက်နဲ့ပွဲမှာကတည်းက ချယ်လ်ဆီးက ကစားပုံကောင်းပြီး ဂိုးမရခဲ့တာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ လီဗာပူးလ်နဲ့ပွဲမှာလည်း ဒီတိုင်းပါပဲ။ သူတို့က တိုက်စစ်ကို ကောင်းကောင်းတည်ဆောက်ပြနိုင်ခဲ့ပြီး ဂိုးရဖို့တော့ ခက်ခဲနေဆဲပါ။ ပီဒရို နဲ့ ပူလီဆစ်တို့ အခွင့်အရေးတွေ အများကြီး ရခဲ့ပေမယ့်လည်း ကံတရားကြောင့်ရော၊ အဆုံးသတ်ပိုင်းညံ့ဖျင်းတာကြောင့်ပါ ဂိုးမရခဲ့တာပါ။ ဂီရော့ဒ်ရဲ့ သွင်းဂိုးကလည်း အဆုံးသတ်ကောင်းလွန်းလို့သာ ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယပိုင်းမှာ လီဗာပူးလ်က နှစ်ဂိုးသွင်းပြီး ဂျော်ဂျင်ဟိုက ပင်နယ်တီကနေ ပြန်ချေပခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ ချယ်လ်ဆီးအတွက် အခွင့်အရေးတွေ အများကြီးရခဲ့ပြီး ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ ဖြစ်သင့်ခဲ့ပေမယ့် လွဲချော်ခဲ့ရပါတယ်။ အေဘရာဟမ်ရဲ့ ဂိုးပေါက်ရှေ့က ပိတ်သွင်းယူမှုကလည်း အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာလွဲချော်ခဲ့ရပါတယ်။
၁။ လွဲမှားခဲ့တဲ့ လမ်းပတ်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်
ပင်နယ်တီကန်သွင်းဖို့အတွက် အေဘရာဟမ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့တာက လမ်းပတ်ရဲ့ အမှားကြီးတစ်ခုပါပဲ။ ပွဲကောင်းတစ်ပွဲ၊ ပရိသတ်အများအပြားနဲ့ ကစားရတဲ့ ပွဲမှာ အေဘရာဟမ်ကို လမ်းပတ်က ယုံကြည်စွာနဲ့ ကန်သွင်းဖို့ တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ တာဝန်ပေးခဲ့တာတောင်မှ နောက်ဆုံးအလှည့်ကျသူအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ အေဘရာဟမ်က ဖိအားတွေနဲ့ ကစားသမားပါ။ ယူနိုက်တက်နဲ့ပွဲမှာ ခြေစွမ်းမပြနိုင်တာ၊ ဒီပွဲမှာလည်း သေချာပေါက်ဂိုးကန်သွင်းခွင့်ကို လွဲချော်ခဲ့ပြီး ယုံကြည်မှုယိုင်နဲ့နေသူပါ။ ဒါကို လမ်းပတ်က ရွေးချယ်ခဲ့တာက မေးခန်းထုတ်စရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်းပဲ အေဘရာဟမ်ရဲ့ ရိုးစင်းတဲ့ ကန်သွင်းချက်ကို အန်ဒရီယန်က ခြေထောက်နဲ့ ဟန့်တားသွားခဲ့ပြီး လီဗာပူးလ်ကို နိုင်ပွဲယူပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ ချယ်လ်ဆီးအနေနဲ့ ကစားပုံကောင်းခဲ့ပြီးမှ ရှုံးရတာ နှစ်ပွဲရှိသွားပါပြီ။ တိုးတက်မှုတွေကို မြင်ရတာက အမြတ်ထွက်တယ်လို့ပဲ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။
လမျးပတျရဲ့ခယျြလျဆီးကတော့ ဥရောပစူပါဖလားပှဲမှာ လီဗာပူးလျကို ပငျနယျတီနဲ့ အရေးနိမျ့ခဲ့ပွီး ရှုံးပှဲဆကျခဲ့ပါတယျ။ ခွစှေမျးပိုငျးအရ ကနြေပျစရာကောငျးခဲ့ပမေယျ့လညျး ဖလားလုပှဲတဈပှဲမှာ အရေးနိမျ့ခဲ့တာမို့ နာကငျြစရာတှတေေ့ာ ဖွဈလာခဲ့ရပါတယျ။ ကနျတေ၊ ပူလီဆဈ နဲ့ ဂီရော့ဒျတို့ကို ထညျ့သှငျးခဲ့တဲ့ ခယျြလျဆီးကစားပုံက မြှျောလငျ့ခငျြစရာတော့ ရှိနခေဲ့ပါတယျ။ ဒီပှဲမှာလညျး ဦးဆောငျဂိုးရခဲ့ပွီးမှ အရေးနိမျ့ခဲ့တာပါ။ ခယျြလျဆီး ဘာလို့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ရတာလဲဆိုတာကို တှကျဆကွညျ့မယျဆိုရငျ..။
၃။ ဖာမီနိုကို မထိနျးနိုငျခဲ့
ပထမပိုငျးမှာ ခယျြလျဆီးက လီဗာပူးလျကို ကောငျးကောငျးထိနျးခြုပျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ သူတို့ကပိုပွီးတော့ ဘောလုံးပေးပို့မှုတှေ ပွုလုပျနိုငျခဲ့သလို အခှငျ့အရေးတှလေညျး ဖနျတီးနိုငျခဲ့တာပါ။ ဒါပမေယျ့လညျး ဒုတိယပိုငျးမှာ ဖာမီနိုဝငျလာပွီးနောကျ အားလုံးပွောငျးလဲသှားခဲ့ပါတယျ။ ဖာမီနိုက ခယျြလျဆီးညာခွမျးခံစဈကို အခြိနျပွညျ့ပွေးလှားလှုပျရှားပွနပွေီး ဒုက်ခပေးသှားခဲ့ပါတယျ။ ဖာမီနိုရဲ့ အလှုပျကစားမှုတှကေ အသငျးဖျောမာနေးကိုပါ ခွစှေမျးပွလာနိုငျစပွေီး သူ့ကွောငျ့ပဲ နရောလှတျတှေ ရလာပွီး ကစားပေါကျခြောငျသှားတဲ့ မာနေးက လီဗာပူးလျအတှကျ ဂိုးတှသှေငျးပေးသှားခဲ့ပါတယျ။
၂။ အရေးကွီးတဲ့အခြိနျမှာ ပှဲကိုအဆုံးမသတျနိုငျခွငျး
ယူနိုကျတကျနဲ့ပှဲမှာကတညျးက ခယျြလျဆီးက ကစားပုံကောငျးပွီး ဂိုးမရခဲ့တာကို တှခေဲ့ရပါတယျ။ လီဗာပူးလျနဲ့ပှဲမှာလညျး ဒီတိုငျးပါပဲ။ သူတို့က တိုကျစဈကို ကောငျးကောငျးတညျဆောကျပွနိုငျခဲ့ပွီး ဂိုးရဖို့တော့ ခကျခဲနဆေဲပါ။ ပီဒရို နဲ့ ပူလီဆဈတို့ အခှငျ့အရေးတှေ အမြားကွီး ရခဲ့ပမေယျ့လညျး ကံတရားကွောငျ့ရော၊ အဆုံးသတျပိုငျးညံ့ဖငျြးတာကွောငျ့ပါ ဂိုးမရခဲ့တာပါ။ ဂီရော့ဒျရဲ့ သှငျးဂိုးကလညျး အဆုံးသတျကောငျးလှနျးလို့သာ ရခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒုတိယပိုငျးမှာ လီဗာပူးလျက နှဈဂိုးသှငျးပွီး ဂြျောဂငျြဟိုက ပငျနယျတီကနေ ပွနျခပြေခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီနောကျပိုငျးမှာ ခယျြလျဆီးအတှကျ အခှငျ့အရေးတှေ အမြားကွီးရခဲ့ပွီး ပှဲကိုအဆုံးသတျနိုငျဖို့ ဖွဈသငျ့ခဲ့ပမေယျ့ လှဲခြျောခဲ့ရပါတယျ။ အဘေရာဟမျရဲ့ ဂိုးပေါကျရှကေ့ ပိတျသှငျးယူမှုကလညျး အံ့အားသငျ့ဖှယျရာလှဲခြျောခဲ့ရပါတယျ။
၁။ လှဲမှားခဲ့တဲ့ လမျးပတျရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ပငျနယျတီကနျသှငျးဖို့အတှကျ အဘေရာဟမျကို ရှေးခယျြခဲ့တာက လမျးပတျရဲ့ အမှားကွီးတဈခုပါပဲ။ ပှဲကောငျးတဈပှဲ၊ ပရိသတျအမြားအပွားနဲ့ ကစားရတဲ့ ပှဲမှာ အဘေရာဟမျကို လမျးပတျက ယုံကွညျစှာနဲ့ ကနျသှငျးဖို့ တာဝနျပေးခဲ့ပါတယျ။ တာဝနျပေးခဲ့တာတောငျမှ နောကျဆုံးအလှညျ့ကသြူအဖွဈရှေးခယျြခဲ့တာပါ။ အဘေရာဟမျက ဖိအားတှနေဲ့ ကစားသမားပါ။ ယူနိုကျတကျနဲ့ပှဲမှာ ခွစှေမျးမပွနိုငျတာ၊ ဒီပှဲမှာလညျး သခြောပေါကျဂိုးကနျသှငျးခှငျ့ကို လှဲခြျောခဲ့ပွီး ယုံကွညျမှုယိုငျနဲ့နသေူပါ။ ဒါကို လမျးပတျက ရှေးခယျြခဲ့တာက မေးခနျးထုတျစရာလညျး ဖွဈပါတယျ။ အားလုံးသိပွီးတဲ့အတိုငျးပဲ အဘေရာဟမျရဲ့ ရိုးစငျးတဲ့ ကနျသှငျးခကျြကို အနျဒရီယနျက ခွထေောကျနဲ့ ဟနျ့တားသှားခဲ့ပွီး လီဗာပူးလျကို နိုငျပှဲယူပေးသှားခဲ့ပါတယျ။ ခယျြလျဆီးအနနေဲ့ ကစားပုံကောငျးခဲ့ပွီးမှ ရှုံးရတာ နှဈပှဲရှိသှားပါပွီ။ တိုးတကျမှုတှကေို မွငျရတာက အမွတျထှကျတယျလို့ပဲ ဆိုရပါလိမျ့မယျ။
Home Football လီဗာပူးလ်နဲ့ပွဲစဉ်မှာ လမ်းပတ် ဘာတွေမှားယွင်းခဲ့လဲ?